कुपोषित बालबालिकाको उपचार गर्न किन मान्दैनन् अभिभावक ? - samayapost.com
कुपोषित बालबालिकाको उपचार गर्न किन मान्दैनन् अभिभावक ?
समयपोष्ट २०७४ भदौ २८ गते ८:३६
कर्णाली अञ्चलमा भयावहरुपमा देखिएको कुपोषणको उपचारमा स्थानीयबासी जान नमानेका कारण कुपोषणको अवस्था चर्कोरुपमा बढ्न थालेको छ ।
जिल्ला अस्पताल, कालीकोटका पोषण अधिकृत कटक महत अस्पतालमा आएमा बच्चाको उपचारको जिम्मा जिल्ला अस्पतालले नै लिने बताउँछन् ।
उनले जुनसुकै हालतमा भएपनि बच्चालाई उपचारका लागि जिल्लामा पठाउन अनुरोध गरेको बताए । कालीकोटमा यसअघि साविकको फुकोट हाल रास्कोट नगरपालिका–६ निवासी रने लुवारकी छोरी मनसरा लुवारको आँखाको नानी फुटेर क्यान्सर हुँदा आँखामा किरा परेको अवस्थामा काठमाडौँमा उपचार भएको थियो ।
कालीकोट जिल्लामा अहिले स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी निकायले एक हजारभन्दा बढी अर्थात् ६३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ ।
कडा कुपोषणका लागि शीघ्र उपचार गर्न सरकारले गएको वर्ष कर्णाली अञ्चलका ५० भन्दा बढी ठाउँमा उपचारका लागि बहिरंग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कालीकोटमा यसअघि तीन बालबालिकाको कुपोषणबाट ज्यान गइसकेको छ ।रासस